February 21, 2012 by chowutyee ထမင်းပေါင်း (၃ယာက်စာ)
Posted in တရုတ်ဟင်း ချက်ပြုတ်နည်း, အဓိက ဟင်းလျာများ | 22 Comments	22 Responses
This recipe is even better than usual steamed rice you can get from the small Chinese restaurants! If you like steamed rice like I do, this isareally good recipe to cook at home! My recommendation😀
really…cool bro..i really evny you as u can eat everyday…i can eat everyday too if u and pig yee will come to uk hee😀 will try today😉
@Hmone Gyi, if you eat like me, you will be fat in no time – just like me😛
ရွှေဇင် မြှောက်ပြောလွန်းလို့ ဘယ်လိုနေရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး.. ဟဲဟဲ… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလို ၀တ်ရည် ဟင်းတွေကို ချက်လို့လည်း ရွှေဇင်ကို အရမ်းကျေဇူးတင်ပါတယ်.. ဟင်းကောင်းတယ်ဆိုတာ ရွှေဇင်တော်လို့ပါ ၀တ်ရည်က ချက်နည်းပဲပြောပြတာပါ။.. heee😉
Ma Nandar ဒီထမင်းပေါင်းက တကယ် စားလို့ အရမ်းကောင်းပါတယ်.. လုပ်စားကြည့်ပါနော်… ၀တ်ရည်တောင် ထပ်လုပ်စားကြည့်မလို့… မနက်ဖြန်လောက်ပဲ တူနေပြီ… ဟီးဟီး…🙂
စားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာ မနန္ဒာကိုယ်တိုင်ကလည်း ဟင်းချက်တော်လို့ပါနော်… ထမင်းပေါင်းကို ၀တ်ရည်လည်း ကြိုက်တာမို့ ၂ရက်ဆက်တိုက်တောင် လုပ်စားဖြစ်သေးတယ်… ဟဲဟဲ… Thanks!😛
I like it so much. Thanksalot for the recipe…🙂
PN ရေ အပြင်မှာ အရောင်ရော၊ အရသာပါ ကောင်းပါတယ်.. လုပ်စားကြည့်ပါနေနာ်…🙂
၀တ်ရည်ကလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်… တခြားမုန့်လုပ်နည်းတွေလည်း လုပ်စားကြည့်ပါအုန်းနော်..🙂
အမဟင်းချက်​နည်း​တွေ လုပ်​စားရလွန်းလို့ လူလည်းဝလာပြီ။ဒါ​ဗေမဲ့ သမီးတို့ညီအမနှစ်​​ယောက်​အ​မေဆုံးပြီးတဲ့​နောက်​ပိုင်းအမကဆရာပဲ။​ကျေးဇူးတင်​စွာဖြင့်​အမြဲအား​ပေး​နေမဲ့…..🍱🍴?🍱